Ngakho lokhu kuseyihora! ubaba Happy ucosha esibhedlela unina wezingane ezintathu! Injabulo izikhathi ezintathu, kodwa kokuhlupheka ezingaphezu kuka ncamashi isici esifanayo. Inkathazo lokuqala sina iqala lapho ekhetha stroller. abantu abanolwazi bathi kukhethwa strollers for ezintathu - engathí kuyinkimbinkimbi. Lapho ekhetha, kubalulekile ukuba acabangele ezicini eziningana, okuyinto ungenawo unake lapho ekhetha sabakhubazekile ezivamile.
Noma yimuphi stroller ngoba ezintathu ifakwe uhlaka ukusonga phansi, izihlalo adjustable, amasondo ezinkulu olulodwa noma amasondo naphakathi nge cushioning nakakhulu. Uhlaka lo mklamo has namandla high, banikezwe ezinkulu isisindo umthwalo. Kuye izintandokazi zakho noma isimo esihlalweni enyakazayo kungase kushintshwe, uma kunesidingo - ukwenza kube ovundlile. Futhi, esihlalweni zingafakwa kokubili kokuqondisa yezokuvakasha kanye ngokumelene. Lokhu kuwusizo ikakhulukazi strollers izingane ezindala kuka izinyanga 6, ngoba ngalesi yobudala lapho kakhulu othanda kokuzungeza nokubheka nomunye. Nokho iyiphi stroller for ezintathu maneuverability okusezingeni eliphezulu ukuba abahlukile, ngoba Ubukhulu bayo inkulu ngokwanele.
Isikhathi esining impela, kuphakama impikiswano emikhayeni nge ezintathu kulokho stroller ukuthenga: ekhethekile noma kwetayela. Isixazululo Yiqiniso, kuyinto kushiyelwa kubazali, ngakho uzisebenzise kanjani. Nokho, kuhle ukucabangela ezicini eziningana ukukhuluma esivuna yokufuna a sabakhubazekile ekhethekile. Okokuqala, ukuze ezintathu stroller ivumela umzali oyedwa ukuthatha uhambo kanye nazo zonke izingane, sokukhulula nezinye ubhekene namacala okushayela. Okwesibili, lokhu stroller kulula phinda futhi akakubangeli ubuhlungu lapho ezihambelayo zommbila, ke ingena kalula isiqu noma iyiphi imoto ungangemuki isikhala kakhulu endlini. Okwesithathu, inani lentengo yayo ingaphansi kakhulu ukwedlula evamile ezintathu, futhi onobuhle abaningi ifakwe imishini ekhethekile ukufakwa i esihlalweni imoto ingane. Okwesine, amasondo lawa namakalishi zilawulwa kusuka amasondo ayo. Okwesihlanu, indlela ukusonga sisobala: ohlangothini isibambo ikuvumela ukuba bafeze lo msebenzi ngisho ngesandla esisodwa.
Stroller for ezintathu, yebo, kukhethwe ngesisekelo imingcele ethile, ngenxa yezizathu ezisobala, kodwa ungakhohlwa mayelana ezinye izidingo indinganiso ukuthengwa ngokuphelele yimuphi stroller. Kufanele sinake izinto kusuka kulo yakhiwa, futhi makudle zemvelo. Kuyadingeka ukuba uhlole amabhande esihlalweni futhi ukuhlola ukwethembeka. amasondo Inflatable ezinkulu - isiqinisekiso esihle sezwe strollers kunoma yimuphi umgwaqo. Isihlalo futhi bassinet esikhiphekayo ongakhetha ukunikeza kalula eyengeziwe ukuze usebenzise lezozinkonzo. Isici esibaluleke kakhulu luhlaka, okuyinto okuthembekile, ke akubangi ukungabaza. It kuncike isisindo lozimele ikalishi, bese kuba ngolunye, futhi isisindo kwezingane.
Cishe kuwo wonke amazwe akhiqiza prams. Poland ungumholi phakathi abakhiqizi futhi izinga, nawo onke nenqubo abalwe ngenhla.
A ethile abalulekile zonke strollers ngoba ezintathu kuyinto isisindo eside kanye nosayizi omkhulu efomini zenzeka, kodwa futhi ukuba asigweme lesi - nje ukuze baqonde ubukhulu.
Lapho yene fontanelle e neonates futhi yini okumelwe siyibheke?
Life nemiSebenzi esenina. lenkaba zesiFundo Yesenin
"Drops ka tvoix rukax" - i sine kakhulu
Indlela yokwenqaba umshwalense ngemali mboleko: imiyalelo, ama-nuances, izincomo kanye nempendulo